अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, अमेरिका, इ England्ल्याण्ड, फ्रान्स, क्यानडा र अन्य धेरै देशहरूमा धेरै भेडा फार्महरू छन्। हो, यसले भेडाहरूका मलहरू उत्पादन गर्दछ। ती जैविक मल उत्पादनका लागि राम्रा कच्चा माल हुन्। किन? भेडा मलको गुणस्तर पशुपालनमा पहिलो हो। भेडाको चारा चयन कलियाहरू, कोमल घाँस, फूल र हरियो पातहरू हुन्, जुन नाइट्रोजन एकाग्रताका अंगहरू हुन्।
ताजा भेडाहरूको मलमा ०..46% फास्फोरस र ०.२3% पोटेशियम हुन्छ, तर नाइट्रोजन सामग्री ०..66% को हुन्छ। यसको फास्फोरस र पोटेशियम सामग्री अन्य पशुको मलसँग समान छन्। अर्गानिक पदार्थ सामग्री लगभग 30०% सम्म हुन्छ, अन्य जनावरको मल भन्दा टाढा। गोबरमा नाइट्रोजन सामग्री दोगुना सामग्री भन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारण, जब माटोमा समान मात्रामा भेडाको मल प्रयोग गरिन्छ, मलको दक्षता अन्य जनावर मलहरू भन्दा धेरै बढी हुन्छ। यसको मल प्रभाव द्रुत छ र शीर्ष ड्रेसिंगको लागि उपयुक्त छ, तर पछिविघटित किण्वन वा दाना, अन्यथा बिरुवाहरू जलाउन सजिलो छ।
भेडा रुवाउने पोथी हो, तर बिरलै पानी पिउँदछ, त्यसैले भेडाहरूको मल सुख्खा र राम्रो छ। मल को मात्रा पनि धेरै सानो छ। भेडाको मल, तातो मलको रूपमा, घोडाको मल र गोबरको बीचमा जनावरहरूमध्ये एक हो। भेडाको मलमा तुलनात्मक रूपमा समृद्ध पोषकहरू हुन्छन्। यो दुबै सजिलैसँग प्रभावकारी पौष्टिक तत्वहरूमा विभाजित गर्न सकिन्छ, तर विघटन गर्न गाह्रो पोषकहरू पनि छन्। त्यसकारण, भेडाहरू मल जैविक मल भनेको माटोको विभिन्न प्रकारको उपयोगको लागि द्रुत-अभिनय र कम-अभिनय मलको संयोजन हो। भेडाहरूको मलजैव-मल-किण्वन ब्याक्टेरिया कम्पोस्टिंग किण्वन, र परालको टुक्रा टुक्रा पारे पछि जैविक जटिल ब्याक्टेरियाहरू समान रूपमा हलचल हुन्छन्, र त्यसपछि एरोबिक द्वारा, anaerobic किण्वन कुशल जैविक मल बन्न।
भेडाहरूको फोहोरमा जैविक पदार्थको सामग्री २%% - २%%, नाइट्रोजन सामग्री ०. 0.% - ०.8% थियो, फास्फोरसको सामग्री ०..45% - ०.%% थियो, पोटेशियमको सामग्री ०. 0.3% - ०.%% थियो, सामग्री भेडाहरूमा जैविक पदार्थ%%, नाइट्रोजन सामग्री १.3% देखि १.4%, एकदम थोरै फस्फोरस, पोटेशियम धेरै धनी छ, २.१% देखि २.3% सम्म।
भेडा खाद कम्पोष्टि / / किण्वन प्रक्रिया:
१. भेडाको मल र एक थोडा पराल पाउडर मिक्स गर्नुहोस्। पराल पाउडरको मात्रा भेडाको मल नमी सामग्रीमा निर्भर गर्दछ। सामान्य कम्पोस्टिंग / किण्वनको लागि% 45% ओस चाहिन्छ।
२ भेडाको खाद्यान्न सामग्रीमा १ किलोग्राम जैविक जटिल ब्याक्टेरिया वा १. ton टन ताजा भेडाहरू मल थप्नुहोस्। १: of०० को अनुपातमा ब्याक्टेरिया पातलो गरेपछि, तपाईं समान रूपमा भेडाहरूको मल पदार्थको थुप्रोमा स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। उचित मात्रामा कॉर्नमेल, मकै पराल, सुख्खा घाँस, आदि थप्नुहोस्।
It. यो राम्रोसँग सुसज्जित हुनेछ मल मिक्सर जैविक सामग्री हलचल गर्न। मिश्रण एक समान हुनुपर्दछ, खण्ड नछोडी।
All. सबै कच्चा सामग्रीहरु मिक्स गरे पछि, तपाई विंड्रो कम्पोस्ट पाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। ढेर चौडाई ०.-3--3.० मिटर छ, उचाई १.२-२.० मिटर छ। लम्बाइका लागि, m मिटर भन्दा राम्रो छ। जब तापमान ℃ 55 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढि छ, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछकम्पोस्ट विन्ड्रो टर्नर मेसिन यो मोड्न।
सूचना: त्यहाँ केहि कारकहरू छन् जुन तपाईंको सम्बन्धित छन् भेडाहरू मल खाद बनाउनेजस्तै तापमान, C / N अनुपात, pH मान, अक्सिजन र मान्यीकरण, आदि।
The. कम्पोस्ट days दिनको तापमान वृद्धि, days दिन गन्ध रहित, days दिनको ढीला, १२ दिनको सुवासिक, १ days दिन विघटनमा हुनेछ।
a तेस्रो दिन, कम्पोस्ट ढेरको तापमान 60० ℃ - ℃० to मा बढ्छ, जसले ई। कोलाई, अण्डाहरू र अन्य बोटबिरुवाको रोग र कीरा किरा मार्दछ।
b पाँचौं दिनमा भेडाहरूको मलको गन्ध हटाइन्छ।
c नवौं दिनमा कम्पोस्टिंग सफा र सुक्खा हुनेछ, सेतो हाइफाइले ढाकिएको।
d पहिलो बाह्रौं दिनमा, यसले वाइन स्वाद उत्पादन गर्दछ;
e पन्ध्रौं दिनमा भेडाहरूको मल परिपक्व हुन्छ।
जब तपाईं विघटित भेडाहरूको मल कम्पोस्टि make्ग गर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको बगैंचा, फार्म, बगैचा, आदिमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं जैविक मलको दाना वा कणहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने कम्पोष्ट मल हुनुपर्दछ। गहिरो जैविक मल उत्पादन।
भेडा खाद वाणिज्यिक जैविक ग्रेन्युल उत्पादन
कम्पोस्टिंग पछि, जैविक मल कच्चा माल लाई पठाइन्छ अर्ध भिजा सामग्री कोल्हू कुचल्नु र त्यसपछि आवश्यक तत्वहरूको स्तरहरू पूरा गर्न कम्पोस्टिंग (शुद्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस पेन्टोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, आदि) मा अन्य तत्वहरू थप्नुहोस्, र सामग्रीहरू मिलाउनुहोस्। प्रयोग गर्नुहोस्नयाँ प्रकारको जैविक मल ग्रेन्युलेटर कणहरु मा सामग्री दाने गर्न को लागी। कणहरू सुख्खा र शीतल गर्नुहोस्। प्रयोग गर्नुहोस्स्क्रिनर मेशीन वर्गीकृत मानक र अयोग्य ग्रेनियुलहरू बनाउन। योग्य उत्पादनहरू सिधा प्याकेज गर्न सकिन्छस्वचालित प्याकिंग मेसिन र अयोग्य ग्रेनियुलहरू पुन: दानाको लागि क्रेशरमा फिर्ता हुनेछ।
सम्पूर्ण भेडाहरू मल जैविक मल उत्पादन प्रक्रियालाई कम्पोस्टिing्ग-क्रि-्ग-्ग-मिक्सि-्ग-ग्रेनुलेटि--ड्राई--कूलि--स्क्रिनिंग-प्याकेजि into्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
तपाईको छनोटको लागी त्यहाँ बिभिन्न किसिमका जैविक मल उत्पादन लाइन (साना देखि ठूला मा) छ।
भेडा खाद जैविक मल उर्वरक अनुप्रयोग
१ भेडा मल जैविक मल विघटन ढिलो छ, त्यसैले यो आधार मलको लागि उपयुक्त छ। यसले बालीमा उपज प्रभाव बढाएको छ। यो तातो जैविक मलको संयोजनको साथ राम्रो हुनेछ। बलौटे र अत्यन्त टाँसिने माटोमा लागू गरिएको छ, यसले उर्वरता सुधार गर्न सक्छ, तर माटो ईन्जाइम गतिविधि पनि सुधार गर्न सक्छ।
२. जैविक मलमा पौष्टिक आवश्यकताहरू कायम राख्न कृषि उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वहरू हुन्छन्।
Organ. जैविक मल भनेको माटो चयापचयको लागि फाइदा हो, माटोको जैविक क्रियाकलाप, संरचना र पोषण सुधार।
It. यसले बालीनाली खडेरी प्रतिरोध, चिसो प्रतिरोध, पृथक्करण र नुन प्रतिरोध र रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ।